Sports Archives - Page 2 of 2 - Puntland Mirror Believable Media Website
July 26, 2016 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda kubada cagta Puntland ayaa ku guulaysatay ciyaaraha maamul goboleedyada dalka kadib markii ay gool ku laad ku garaacday kooxda Jubbaland. Kooxda Puntland ayaa 5-3 gool ku laad ah ku guulaysatay kadib 90-kii […]
July 23, 2016 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda kubada cagta Puntland ayaa Hiiraan & Shabeelaha Dhexe ku garaacday 1-0 ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya, taasoo Puntland u sahashay u gudbida ciyaarta kama dambaysta ah. Gool kaliya oo uu dhaliyay Yacquub Cusmaan […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) isku-aadka ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya oo ka socda magaalada Muqdisho ayaa lasoo saaray, sida ay sheegeen xiriirka kubada cagta Soomaaliya. Kooxda Kubada cagta Banaadir oo tartanka martigelinaysa ayaa ku dhacday kooxda Jubaland, Banaadir […]
July 17, 2016 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda kubada cagta ee Puntland ayaa ku garaacay Koonfur Galbeed 4-0 ciyaartoodii ugu horeysay ee koobka maamul goboleedyada Soomaaliya. Goolal ay ka heleen Yacquub Cusmaan iyo Abdiwaaxid Dhakab Dhakab ayaa u suurta gashay […]
July 11, 2016 Puntland Mirror 0
Xulka kubada cagta dalka Portugal ayaa markoodii ugu horeysay ku guulaystay koobka qaramada qaarada Yurub ee sanadka 2016-ka. Gool uu dhaliyay Eder intii lagu guda jiray soddonka daqiiqo oo dheeriga ah ayaa Portugal u ogolaaday […]
June 27, 2016 Abdi Omar Bile 0
Lionel Messi ayaa iclaamiyay inuu ka fariistay waajibaadka qaranka ee ciyaaraha caalamiga ah kadib markii gool ku laad uu khasaariyay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka America. “Waxay igu tahay wax aan la aqbali […]
Xiriirka kubadda Koleyga Aduunka oo Soomaaliya usoo diray qabiir kormeer ku sameya heerkaay mareyso kubadda Koleyga +Sawirro Xiriirka kubadda Koleyga Aduunka (Fiba World) ayaa dalka Soomaaliya usoo diray qabiir soo indha indheeya xaalada k horumarka […]
Zlatan Ibrahimovic ayaa lagu soo waramayaa in uu ka soo tagi doono xerada tababarka Sweden kahor Euro 2016 si uu ugu saxiixo Manchester United. 34 jirka waxa uu bilaash uga tagayaa Paris Saint-Germain, waxaana xiise […]